【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】 ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကွောကျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျခုခံအားစနဈ | Opinion Leaders
အခုတလော ကမ်ဘာအနှံ့အဝနျးမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုပွဿ လနာဟာပိုပွီးကယျြပွနျ့လာပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီ ၂၅ ရကျထိ စာရငျးတှအေရ တောငျကိုရီးယားမှာ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျသူ ၈၉၃ ဦးထိ အတညျပွု တှရှေိ့ထားပွီး ဒီထကျ အမြား ကွီး ပိုနိုငျသေးတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ သဆေုံးသူ အရအေတှကျကတော့ ၉ ဦး ရှိလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ကြှနျတျောတို့ ရှမွေနျမာ တှေ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုကိုကာကှယျရနျ ခုခံအားစနဈကိုမွှငျ့တငျထားရပါမယျ။
လူတဈယောကျအနနေဲ့ ခုခံအားစနဈကောငျးမှနျအောငျ ဘာတှလေုပျရမလဲ?
ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ အာဟာရဓာတျအုပျစုကွီး (၇) ခုရှိပါတယျ။ ယငျးတို့မှာ
သနျ့ရှငျး၊ လတျဆတျ ပူပူနှေးနှေးအစားအစာတှကေိုအဓိကစားရပါမယျ။ခုခံအားကိုထိခိုကျကဆြငျးစမေယျ့ ဓာတုဆိုးဆေးပါတဲ့ အစားအစာတှေ၊ တူးအောငျကငျထားတဲ့အကငျတှေ၊ မီးဖုတျတှေ၊ ဆီကွျောတှေ၊ မှိုတကျစာတှကေို ရှောငျရပါမညျ။ ယနခေ့တျေ ဆေးပညာရဲ့အသဈတှရှေိ့ခကျြတဈခုမှာ ဘိုငျအိုတဈ (Probiotic) က လူတှရေဲ့ကနျြးမာရေးကိုမြားစှာအထောကျအကူပွု ကွောငျးတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ ပရိုဘိုငျအိုတဈဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာရှိတဲ့ အကြိုးပွုအဏုဇီဝပိုးလေးတှေ ဖွဈပါတယျ။ အဓိကအနနေဲ့ အူနဲ့အစာလမျးကွောငျးမှာနပွေီး အူနံရံတဈလြှောကျ ခုခံအားစနဈတှကေိုလှုံ့ဆျောပေးတာ၊ သှေးထဲမှာအငျတီဘျောဒီတှထှေကျလာအောငျ လှုံ့ဆျောပေးတာ ပွုလုပျပွီး ခုခံအားစနဈတှေ နိုးကွားလာစကော ဝငျလာတဲ့ရောဂါပိုးကို ဝိုငျးဝနျးတိုကျခိုကျ နှိမျနငျးလိုကျခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ပရိုဘိုငျအိုတဈကွှယျဝတဲ့အစားအစာတှကေတော့ ဒိနျခဉျြ၊နို့နှငျ့နို့ထှကျပစ်စညျးတှဖွေဈပါတယျ။
အနညျးဆုံးတဈနေ့ ၃၀ မိနဈလောကျသှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုခု ပွုလုပျပေးရပါမယျ။
အကောငျးဆုံးကတော့ မနကျခငျးနထှေကျစနရေောငျခွညျအောကျမှာလမျးလြှောကျရငျ နရေောငျခွညျရဲ့အာနိသငျပါ တဈခါတညျး ရပွီးဖွဈလို့ပိုကောငျးပါတယျ။နရေောငျခွညျဟာဗီတာမငျ ဒီ (Vitamin D)ရစပွေီးသူ့ကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျ ခုခံအားစနဈ ကိုပိုမို တိုးတကျ ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ညဈညမျးတဲ့လဟောခုခံအားစနဈကိုထိခိုကျစပေါတယျ။ ဥပမာမျောတျောကားမီးခိုးတှေ၊ မီးစကျကထှကျတဲ့မီးခိုးတှေ၊ ဆေးလိပျမီးခိုး၊ ခွငျဆေးခှေ၊ အမှေးတိုငျ၊ စကျရုံတှကေထှကျတဲ့မီးခိုးတှအေားလုံးဟာပါဝငျတဲ့အဆိပျအတောကျတှကွေောငျ့ ခန်ဓာကိုယျခုခံအားစနဈကိုကဆြငျးစပေါတယျ။
ခုခံအားစနဈမကောငျးတော့ မကွာခဏဆိုသလိုရောဂါပိုးတှေ ဝငျရောကျတတျပါတယျ။"
အိပျစကျအနားယူတဲ့အခြိနျမှာ ခန်ဓာကိုယျမှာပကျြစီးသှားတဲ့တဈသြှူးတှကေိုပွုပွငျတဲ့အလုပျ (Repair process) ကိုလုပျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တနကေုနျအလုပျထဲပငျပနျးထားသမြှ အိပျစကျအနားယူမှ နောကျတနေ့ အားအငျ အပွညျ့ဖွငျ့ လုပျငနျးခှငျ ဝငျနိုငျမှာ ဖွဈပါ တယျ။အိပျစကျခြိနျကိုအနညျးဆုံး ၆ နာရီကနေ ၈ နာရီလောကျအထိထားဖို့ လိုပါတယျ။လုံလောကျတဲ့ အိပျစကျအနားယူခွငျးပွုပါမှ ခန်ဓာကိုယျခုခံအားစနဈ ကောငျးမှနျမှာဖွဈပါတယျ။
(၅) ခုခံအားစနဈကိုကဆြငျးစမေညျ့ အနအေထိုငျအပွုအမူမြားကို ရှောငျရှားခွငျး
ဥပမာ အရကျအလှနျအကြှံသောကျတာ၊ ကှမျးစားတာ၊ ဆေးလိပျသောကျတာ၊ မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲတာ၊ စိတျပူပငျသောကတှမြေားနတော၊ အစရှိတဲ့ကိစ်စတှကေခုခံအားစနဈ ကိုကဆြငျးစလေို့ ရှောငျကွဉျရမှာဖွဈပါတယျ။
မှနျကနျတဲ့နညျးလမျးမြားဖွငျ့ မိမိခန်ဓာကိုယျခုခံအားစနဈ ကိုမွှငျ့တငျပါ။ * မှားယှငျးသောနညျးလမျးမြားကိုရှောငျရှားပါ။ ဥပမာ အရကျသောကျခွငျး
အခုတလော ကမ္ဘာအနှံ့အဝန်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုပြဿ လနာဟာပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်ထိ စာရင်းတွေအရ တောင်ကိုရီးယားမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ ၈၉၃ ဦးထိ အတည်ပြု တွေ့ရှိထားပြီး ဒီထက် အများ ကြီး ပိုနိုင်သေးတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သေဆုံးသူ အရေအတွက်ကတော့ ၉ ဦး ရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာ တွေ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန် ခုခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ထားရပါမယ်။
လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခုခံအားစနစ်ကောင်းမွန်အောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်အုပ်စုကြီး (၇) ခုရှိပါတယ်။ ယင်းတို့မှာ
သန့်ရှင်း၊ လတ်ဆတ် ပူပူနွေးနွေးအစားအစာတွေကိုအဓိကစားရပါမယ်။ခုခံအားကိုထိခိုက်ကျဆင်းစေမယ့် ဓာတုဆိုးဆေးပါတဲ့ အစားအစာတွေ၊ တူးအောင်ကင်ထားတဲ့အကင်တွေ၊ မီးဖုတ်တွေ၊ ဆီကြော်တွေ၊ မှိုတက်စာတွေကို ရှောင်ရပါမည်။ ယနေ့ခေတ် ဆေးပညာရဲ့အသစ်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ ဘိုင်အိုတစ် (Probiotic) က လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူပြု ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပရိုဘိုင်အိုတစ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ အူနဲ့အစာလမ်းကြောင်းမှာနေပြီး အူနံရံတစ်လျှောက် ခုခံအားစနစ်တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးတာ၊ သွေးထဲမှာအင်တီဘော်ဒီတွေထွက်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးတာ ပြုလုပ်ပြီး ခုခံအားစနစ်တွေ နိုးကြားလာစေကာ ဝင်လာတဲ့ရောဂါပိုးကို ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက် နှိမ်နင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဘိုင်အိုတစ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကတော့ ဒိန်ချဉ်၊နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
အနည်းဆုံးတစ်နေ့ ၃၀ မိနစ်လောက်သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခု ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ မနက်ခင်းနေထွက်စနေရောင်ခြည်အောက်မှာလမ်းလျှောက်ရင် နေရောင်ခြည်ရဲ့အာနိသင်ပါ တစ်ခါတည်း ရပြီးဖြစ်လို့ပိုကောင်းပါတယ်။နေရောင်ခြည်ဟာဗီတာမင် ဒီ (Vitamin D)ရစေပြီးသူ့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားစနစ် ကိုပိုမို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ညစ်ညမ်းတဲ့လေဟာခုခံအားစနစ်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ ဥပမာမော်တော်ကားမီးခိုးတွေ၊ မီးစက်ကထွက်တဲ့မီးခိုးတွေ၊ ဆေးလိပ်မီးခိုး၊ ခြင်ဆေးခွေ၊ အမွှေးတိုင်၊ စက်ရုံတွေကထွက်တဲ့မီးခိုးတွေအားလုံးဟာပါဝင်တဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုကျဆင်းစေပါတယ်။
ခုခံအားစနစ်မကောင်းတော့ မကြာခဏဆိုသလိုရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက်တတ်ပါတယ်။"
အိပ်စက်အနားယူတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာပျက်စီးသွားတဲ့တစ်သျှူးတွေကိုပြုပြင်တဲ့အလုပ် (Repair process) ကိုလုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တနေကုန်အလုပ်ထဲပင်ပန်းထားသမျှ အိပ်စက်အနားယူမှ နောက်တနေ့ အားအင် အပြည့်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။အိပ်စက်ချိန်ကိုအနည်းဆုံး ၆ နာရီကနေ ၈ နာရီလောက်အထိထားဖို့ လိုပါတယ်။လုံလောက်တဲ့ အိပ်စက်အနားယူခြင်းပြုပါမှ ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ် ကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ခုခံအားစနစ်ကိုကျဆင်းစေမည့် အနေအထိုင်အပြုအမူများကို ရှောင်ရှားခြင်း
ဥပမာ အရက်အလွန်အကျွံသောက်တာ၊ ကွမ်းစားတာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတာ၊ စိတ်ပူပင်သောကတွေများနေတာ၊ အစရှိတဲ့ကိစ္စတွေကခုခံအားစနစ် ကိုကျဆင်းစေလို့ ရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းများဖြင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ် ကိုမြှင့်တင်ပါ။ * မှားယွင်းသောနည်းလမ်းများကိုရှောင်ရှားပါ။ ဥပမာ အရက်သောက်ခြင်း